Blac Chyna anoti Rob Kardashian akabhadhara $ 100k yekuvhiya uremu - Nhau
Kuru Style Blog Nhau Varaidzo
Blac Chyna anoti Rob Kardashian akabhadhara $ 100k yekuvhiya uremu
Blac Chyna uye Rob Kardashian vachiri muhondo inorema.
Kudzoka muna Chikunguru, panguva yekudonha kwepamhepo, Rob akataura kuti iye muchivande akabhadhara $ 100,000 kune wake wekare kuve nehuremu hwekuremerwa kuvhiyiwa mushure mechecheche wavo, Kurota, akaberekwa . Panguva iyoyo, aive achiudza vezvenhau kuti akarasikirwa nehuremu hwekare fashoni nekudya uye kurovedza muviri. Zvino, zvakadaro, ari kuti aive Rob uyo akavhiyiwa zvakanyanya.
Mumagwaro edare, Chyna, ane zita chairo anonzi Angela Renée White, akabvuma kuti akavhiyiwa, asi akati Rob akazviitawo, uye anoti aive akatonyanya.
'Saizvozvo, Rob Kardashian iye amene akavhiyiwa uremu izvo zvakadhura $ 100,000, nepo kuvhiya kwaMai White kwaive kwemari shoma, 'magwaro edare anoti. 'Amai White vakaitwa madiki ekushambadzira kusanganisira zamu uye kutapudza matako pamwe nediki remaposuction rakakomberedza dumbu ravo.'
'Amai White vanozivikanwa vezvemagariro venhau vanosimudzira uye vanogadzira tsika vanotsigira zvine hunyanzvi hutano, mararamiro, uye zvigadzirwa zvekudya mumaakaundi avo e Instagram ne Twitter,' zvinyorwa zvematare zvakaenderera. 'Saizvozvo, nenzira iyo Rob Kardashian yakaburitsa ruzivo rwekurapa rwaAmai White rwakaisa pangozi mai White's endorsement inobata nemakambani akati wandei ekudzikisa uremu, kugwinya uye kudya - kuti vese vabhadhare Mai White kusimudzira zvigadzirwa zvavo pasocial media. '
Chyna akambotaura kuti zvakatumirwa naRob zvakakanganisa zita rake uye akaendesa pasi akati wandei uremu ekutsigira endorsement madhiri, achimubhadharira mamirioni.
Munguva yekutya kwaRob, akagovana vhidhiyo yaChyna achiiswa mavhiri mukamuri yemuchipatara.
'Wese munhu anoshamisika kuti Chyna akarasikirwa sei nehuremu hwese mushure memwana uye anonyepa kune wese munhu asi kwete ini ndiri murume mukuru zvekuti pamusi wekurangarira kwedu ndakabhadhara 100K kuti ndiite kuvhiyiwa uku kuti zvinhu zvese zvigadziriswe nepavanogona napo,' iye akanyora. Uye wofungidzira zvaakaita mushure mekupora kwake pese pandanga ndiri parutivi pake nguva yese. Akandisiya nemwana wangu uyo ​​waaive abuda kunze kwekudzokera kune vamwe vake baba baba. Handikwanise kutenda kuti haungandiremekedze seizvi. '
Chyna parizvino Kumhan'arira mhuri yese yeKardashian , vachimupomera kuti vakashandisa simba ravo kumuita kuti 'Rob & Chyna' aratidzwe kukanzurwa, izvo, zvakare, zvakamudhurira mari.
' Rob Kardashian uye mhuri yake ine simba, inotsiva yakanganisa zvakakwana basa raAmai White nehunyanzvi, hwavakavaka kubva pakutanga - vasina rubatsiro rwezita rekupedzisira, 'magwaro edare akadaro. 'Mhosva iyi inoda kuti vazvidavirire.'
Romain Maurice / Splash Nhau
Musi waGumiguru 18, People magazine yakataura kuti mhuri iyi yaiziva kuti mhosva iri kuuya asi yaisatarisira kuti mhuri yese izodomwa.
'Vaiziva kuti kwaiuya. Ivo havana kuziva kuti munhu wese mumhuri achazotumidzwa zita musutu, asi zvakadaro haisi nyaya dzinovhundutsa. Aya ndiwo maziviro avanoita Chyna - anoshamisa uye achaita zvese kuti arambe akabatana nezita reKardashian, 'akadaro sosi.
Kwayedza yakawedzera, 'Ndosaka vakayambira Rob kuti asabatana naChyna pakutanga. Vakamunyevera kuti haasi mutambo wekumira, uye vaitaura chokwadi. Vakasuruvara Roto kuti amai vake vanozvibata seizvi. Ivo havafunge kuti Rob akakwana munzira ipi neipi, asi ivo vanofunga Chyna iri kupfuura yakaipa. Vanongoda kuti mutambo umire. Ivo vese vanoda Kurota uye vanomudzivirira kwazvo. '
Evha nemurume vane 'hurukuro dzisina kugadzikana' nezve rudzi
Matt Damon ari kunyatsoenda kuAustralia nekuda kwaTrump?
janet jackson uye wissam al mana mapikicha emuchato
arnold schwarzenegger naJoseph baena
ndiani chris dombo kudanana
mary elizabeth winstead uye ewan mcgregor
ndiani Elijah huni akaroora
kelly osbourne uremu 2012